प्रत्येक पोष्टमा यी २ तत्वहरू थप्नुहोस्, र तपाईंको ब्लग लोकप्रियतामा विस्फोट हुनेछ Martech Zone
बिहीवार, जनवरी 2, 2014 बिहीवार, जनवरी 2, 2014 Douglas Karr
मैले त्यहाँ के गरेको देख्यौ? कुल, चीजी, अफ-द-चार्टहरू लिङ्कबाइट... र यसले काम गर्‍यो। तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ किनकि मैले ब्लग पोष्ट शीर्षक विशेष तरीकाले लेखेको थिएँ। यो अपफायटेन्ट र बजफिड जस्ता साइटहरूमा कुञ्जी रणनीति हो र तिनीहरूले करोडौं पाठकहरूलाई आफ्नो पोस्ट शीर्षक समायोजित गरेर केवल २ प्रमुख तत्वहरू ... जिज्ञासा र भावना राख्छन्।
जिज्ञासा - २ आईटमहरू उल्लेख गरेर तपाईको दिमाग अचम्म लाग्न थाल्छ र क्लिक गर्ने प्रलोभन एकदम धेरै भयो।
भावना - मैले सावधानीपूर्वक यो शब्द प्रयोग गरें लोकप्रियता पोष्ट शीर्षकमा। कसले आफ्नो ब्लग लोकप्रिय हुन को लागी इच्छा गर्दैन?
यीमा २ तत्वहरू पोष्ट शीर्षक हास्यास्पद रूपले सफल छन् तर तपाईंले तिनीहरूलाई अत्यधिक सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्नेछ। मैले माथि उल्लेख गरेका साइटहरूको म पहिले नै थाकेको छु। जबकि उनीहरूसँग अक्सर अपूरणीय सामग्री हुन्छ, म उनीहरूमा कुनै मूल्य पाउँदिन र बहुमूल्य मिनेटहरू बिरालोहरूको तस्विर ब्राउज गर्ने वा आँसू झिक्ने कथाहरू हेर्दा हराउँछ। नोट: मैले sites 45 मिनेट को लागी तपाईंको ध्यान गुमाउनु पर्ने डरमा मैले ती साइटहरूमा लिंक गरिन।
के यसको मतलब तपाईंले रणनीतिबाट अलग रहनु पर्छ भनेको हो? होईन ... तर मलाई लाग्छ कि तपाइँ शीर्ष शीर्षकहरू माथि जानबाट रोक्नु पर्छ र तपाईंले भन्नुभए जस्तै गर्नुहोस्। मैले पत्ता लगाए कि यी रणनीतिहरू प्रयोग गर्ने धेरै साइटहरू केवल शीर्षकको अपेक्षाहरू पूरा गर्दैनन्। यसलाई केहि notches तल बनाउनुहोस् र तपाईं यो एक शानदार रणनीति पाउनुहुनेछ।
त्यसैले ... मानौं तपाईं एक फोटोग्राफर हुनुहुन्छ र तपाईंसँग फोटो लिनको लागि tips टिप्स छ। मानक ओलको सट्टा 8 सुझावहरू ब्लग पोष्ट, तपाई जस्तो पोष्ट लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईंको अर्को तस्वीर लिनु अघि यी Simple सरल चरणहरू गर्नुहोस् र परिणाममा तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। जिज्ञासा (के चरण?) र भावना (चकित!)।
हुनसक्छ यो फोटो खिच्ने जत्तिकै प्रख्यात चीज होइन। हुनसक्छ यसले तपाईंको टायर जाँच गर्दैछ! तपाईं सुझावहरूको बारेमा लेख्न लाग्नुभएको थियो व्यावसायिक बाट मेकानिक्स। सट्टा… सुरक्षा त्याग बिना टायर जीवन विस्तारको व्यावसायिक रहस्य। पोष्ट अझै पनि हावाको चाप कायम राख्न र तपाईंको टायर घुमाउने बारेमा हुन सक्छ ... तर तपाईं जिज्ञासा (रहस्य?) र भावना (सुरक्षा!) मा ट्याप गरेर कुराकानीलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ।
यसको लागि मेरो शब्द नलिनुहोस्। तपाईंको ब्लग पोष्टको अर्को श्रृंखलामा शट दिनुहोस्। यदि तपाइँ क्लिक-थोरै दरहरू वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँको लेख अधिक देखीनेछ, अधिक साझा, र अतिरिक्त व्यापार को लागी नेतृत्व गर्नेछ। लोकप्रियता मा विस्फोट जानुहोस्!
टैग: जिज्ञासाभावनापोष्ट शीर्षकहरू लेख्नुहोस्लेखन
जनवरी 2, 2014 मा 9: 59 एएम
डग, यो सत्य हो कि लिba्कबाइटले "काम गरेको" अर्थमा जुन म यहाँ छु। मैले तपाईंको पोष्ट पढें। तर मैले यो शीर्षकको कारण पढिनँ — मैले यसलाई पढें किनकि मलाई लेखक थाँहा छ र मलाई लाग्छ कि तपाईंले आफ्नो वाचा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं यस प्रकारले अलि बढी ट्राफिक प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईं मबाट केही संलग्नता प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ टिप्पणीको रूपमा, तर म वास्तवमै महसुस गर्दैछु। थोरै यस समयमा तपाईंको ब्रान्डमा संलग्न म यो पोष्ट साझा गर्न चाहन्न। मलाई लाग्दैन कि यसले यस्तो चीज प्रदान गरेको छ जुन मलाई पहिले थाहा थिएन।
तर त्यो तपाइँको लक्ष्य हुन सक्छ। मलाई लाग्छ कि अपफायटर र बजफिड जस्ता साइटहरूले लाखौं मानिसहरूलाई क्लिक गर्न कोशिस गरिरहेका छन् किनकि उनीहरू उच्च-स्तरको संलग्नतामा रुचि राख्दैनन्। तिनीहरू आफ्नो विज्ञापन र ब्रान्ड सचेतनाको लागि प्रभावहरू खोज्दैछन्, न कि उनीहरूको विशेषज्ञता र गहन रिपोर्टिंगको लागि आदर विकास गर्ने व्यक्तित्वहरू।
के तपाईको सल्लाह मान्य छ? यो मार्केटरको लक्ष्यमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं व्यक्तिहरू जो तपाईंको टायर घुमाउनेको "गोप्य" बाट प्रभावित छन् वा सल्लाहको आधारमा "चकित" हुनुहुन्छ-तिहाई नियमहरूको प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसोभए यो सूत्र सार्थक छ। तर मलाई यो उपभोक्ताको लागि थाहा छ, म लिंकबिटमा क्लिक गर्न प्रयास गरिरहेको छैन। म केवल यहाँ छु किनकि म तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु। यो शीर्षक भएको जो कोही पनि बेवास्ता गरिएको थियो।
जनवरी 2, 2014 मा 10: 20 एएम
अद्भुत retort @robbyslaughter: disqus - र तपाईंले पाउनुहुनेछ कि म पूर्ण रूपमा सहमत छु। मैले वास्तवमै यो रणनीति मेरो ब्लगमा प्रयोग गर्दिन र यसले मलाई अन्य ब्लगहरूमा बन्द गर्‍यो। म राम्रो पोष्ट शीर्षकहरू लेख्न चाहान्छु, यद्यपि, मान्छेहरूलाई बाइटिंग गरेर ओभरबोर्डमा बिना नै। जबकि यो विशिष्ट रणनीति शीर्ष भन्दा माथि हुन सक्छ - मलाई लाग्छ कि जिज्ञासाको उपयोग गरेर भावनामा ट्याप गर्नु कुञ्जी हो ... कुनै पनीर लि link्कबाइट बिना। एक महान कुराकानी शुरू गर्नुभएकोमा धन्यबाद!